दाइ छोड्दिनु त्यसलाई! :: गन्नेश पौडेल :: Setopati
जिन्दगी, जिन्दगी भन्ने बित्तिकै तपाईं हामी आफ्नो जीवनकाल भन्ने बुझ्छौं।
हरेक मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई सुखसँग बिताउन चाहन्छ। तसर्थ जिन्दगी सुखमय बनाउनको लागि संघर्षको आवश्यकता पर्दछ। यति बुझ्नुहोस्, संघर्ष नै जिन्दगी हो।
गाउँमा एक मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएको ऊ ठूलो भएर व्यापारसँगै सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्ने उसको चाहना हुन्छ।
उसको सपना हुनुको एउटै कारण हो व्यापारीको गाउँमा इज्जत अनि सांगीतिक क्षेत्रमा कलाकारले पाएको सम्मान। यो देखेर उसलाई व्यापारी र कलाकार दुवै हुने चाहना हुन्छ।
स्कुल लेबलको पढाइ स्याङ्जाकै एउटा सरकारी स्कुलबाट पूरा गरिसकेपछि ऊ आफ्नो लक्ष्य लिएर गाउँदेखि सहर झर्छ। उसको साथमा परिवार पनि गाउँ छोडी सहर झर्छन्।
उसले प्लस टु घरदेखि केही टाढाको कलेजमा अध्ययन गर्छ। कलेजमा हुँदा साथीभाइसँगको रङरमाइलो हाँस खेल निकै हुन्छ। कोही साथीहरूले सँगै पढ्ने केटी साथीको नाम लिएर जिस्काउँथे। रमाइलो गर्दागर्दै ११/१२ को पढाइ पनि पूरा हुन्छ। अब आफ्नो लक्ष्यलाई झन् काँधमा बोकेर हिँड्नपर्ने बेला आयो। मनमा केही खुसी छ भने खुसीभन्दा बढी आफ्नो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने यही कुराले सताउँथ्यो।
यही कारण परीक्षा सकिएकै पर्सिपल्ट ऊ घरदेखि बिरानो सहर पोखराको लागि निस्कन्छ।
सुरूका केही महिना ऊ साथीको पसलमा बसेर काम गर्छ। केही महिनापछि ऊ आफ्नो पहिलो सपना पूरा गर्ने दौडमा हुन्छ उसको पहिलो सपना थियो व्यापारी बन्ने अनि बल्ल कलाकार हुने। दिन बित्दै जान्छन् उसले ऋणधन गरेर आफ्नै पसल खोलेर एक व्यापारी बनेर पोखरामा संघर्षका दिन बिताइरहेको हुन्छ।
व्यापारतिरै बढी ध्यान दिने ऊ कुनै युवतीको नजरमा थिएन र उसको नजरमा पनि कुनै युवती थिएनन्। हाई, हेल्लो त भइहाल्थ्यो युवतीहरूसँग।
उसले त्यसरी गहिरो भएर पनि सोच्ने थिएन प्रेम सम्बन्धबारे तर दिन सधैं एकैनास अनि मन/सोचाइ पनि एउटै नहुँदो रहेछ।
फेसबुक चलाउने क्रममा उसको नजर एक युवतीको फेसबुक आइडीमा पर्न जान्छ। अरू दिन केटीको रिक्वेस्ट आउँदा पनि मतलब नगर्ने ऊ त्यो दिन एड फ्रेन्डमा एक म्युचुअल फ्रेन्ड भन्दै आएको आइडीमा उसका आँखा रोकिन्छन्, अनि उसको प्रोफाइमा भ्रमण गर्छ।
निकै उत्सुकताका साथ उसले त्यो अपरिचित केटीका नयाँ पुराना सबै फोटोदेखि कसले कस्तो-कस्तो कमेन्ट गर्ने रहेछ सबै हेर्छ।
उसले जस्तो खोजेको तस्तै भेट्टाउँछ।
'ढुंगा खोज्दा देउता मिल्नु' भनेझैं हुन्छ।
कुनै दिनको एक सेकेन्ड समय पनि विशेष हुने रहेछ, त्यो दिन उसका लागि तस्तै भयो। त्यो केटी फेसबुकमा देख्नेबित्तिकै मन परी। उसको नाम थियो काजल वाग्ले।
उसले त्यही दिन काजललाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ। ऊ अब रिक्वेस्ट एसेप्ट कहिले होला भनेर कुरिरहेको हुन्छ। धेरै दिनसम्म पनि रिक्वेस्ट एसेप्ट हुँदैन।
उसले मन अमिलो बनाउँदै लगभग आशा मारेको थियो तर रिक्वेस्ट पठाएको २७ औं दिनमा एसेप्ट हुन्छ। त्यो दिन ऊ निकै खुसी भएको महसुस गर्छ।
काजलले त के म्यासेज गर्थी र अब ऊ आफैं तम्सिन्छ बोल्नलाई। अलिअलि डर, लाज अनि उत्साहित उसको मन हेल्लो लेखेर मेसेज गर्छ।
कतिबेला उताबाट म्यासेज सीन होला भनी बारम्बार आफूले पठाएको मेसेज हेर्छ, उताबाट सीन भयो तर जवाफ आएन।
ऊ पनि के कम्ती फेरि मेसेज पठायो, 'मेसेज सीनमात्रै हो कि रिप्लाइ पनि दिनी ?'
उताबाट जवाफ आयो, 'किन दिनुपर्‍यो रिप्लाइ ?'
यही जवाफबाट उनीहरूको कुराकानी हुन थाल्यो।
यस्तैयस्तै कुरामा वादविवाद हुँदै उनीहरूको कुरा हुन थाल्छ।
एकदिन दुईदिन गर्दागर्दै उनीहरूको कुराकानी अगाडि बढ्दै जान्छ। उसले मनमनै काजललाई आफ्नो बनाइसकेको थियो तर काजलको मनमा के छ त्यो बुझेको थिएन।
कुरा हुँदै गर्दा काजलले सोध्छे, 'तिम्रो नाम यही फेसबुककै हो कि अरू पनि छ ?'
उसले मुस्कुराउँदै मेसेज गर्यो, 'मेरो रियल नाम सागर हो।'
यति भनेपछि काजलले अबदेखि सागर नै भनेर बोलाउने कुरा गर्छे सागरको आइडीको नाम ‘क्षेत्री किङ’ हुन्छ अब भने सागर नै हुने पक्का भयो।
उनीहरू च्याट हुँदै फोनमा समेत कुरा गर्न थाल्छन्। कहिले भिडिओ कल अनि कहिले फोन कल। मेसेजभन्दा बढी फोनमा कुरा हुन थाल्छ। बोल्दाबोल्दै रातको १२/१ बजेको पनि उनीहरू पत्तै पाउँदैनथे।
सागरको सपना थियो काजलसँग च्याटमा बोल्दाबोल्दै फोनमा बोल्ने, भेटघाट हुनेदेखि लिएर जीवनसाथी बन्ने। उसलाई लाग्थ्यो मेरो आधा सपना पूरा भइसक्यो।
अब उनीहरूको भेट्ने कुरा हुन्छ, पहिलो भेट कस्तो हुने होला के भन्ने होला यस्तै अनेक कुराहरू मनमा खेल्न थाल्छन्।
उनीहरू भेट हुन्छन्, मिठामिठा गफ गर्छन्। उनीहरू दुबै खुसी देखिन्थे। अब त भेटघाट पनि हुन थाल्यो लगभग एक अर्काको मायामा डुबिसकेका हुन्छन् दुबै जना।
शनिबार आउनासाथ उनीहरू घुम्नलाई निस्कन्थे। एकअर्काबाट नछुट्टिने बाचाकसम खाँदै सधैं सँगै रहने बाचा गर्थी काजल।
उसको कुरामा सागर झनै खुसी हुन्थ्यो।
सागरले आफ्नो परिवारजनमा काजलको भेट गराउँछ, परिचय गराउँछ। उसका परिवारका सबै सदस्य खुसी थिए।
आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे साथीहरूसँग पनि कुरा सेयर गर्थ्यो सागर। साथीहरूले भन्थे, 'धेरै ढुक्क नभै है केटा, केटी हेर्दा यसको अन्तै अरू कोइ पनि छ जस्तो लाग्छ। भर चाहिँ नपर्नु, कलियुग हो कसैको पनि यति धेरै विश्वास गर्नुहुँदैन'
तर सागरलाई ती साथीहरूको भन्दा आफ्नी काजलको बढी विश्वास लाग्थ्यो, किनकि उसले काजललाई मनबाटै माया गरेको थियो।
कुरा सिधा थियो सागरले आफ्नो परिवारसँग भेट गराउँदा काजलले भने आफ्नो परिवारसँग भेट त त्यस्तै हो परिवारबारे केही पनि भन्ने थिइन। होस् मलाई माया गर्छिन् क्यारे परिवारको डरले होला भेट नगराउने र परिवारको सबै कुरा सेयर नगरेकी समय आएपछि विस्तारै सेयर गर्नेछिन्, हो ऊ त्यही आशामा रमाउँथ्यो।
समय बित्दै गयो, सागरले मेसेज नगरेसम्म काजलले मेसेज गर्न छोडिन्। सागर सोच्थ्यो, 'जसले गरे पनि गरे त भइहाल्यो नि, मलाई मन विचार गर्नको लागि पो पहिला आफूले मेसेज नगरेकी हुन् कि ?'
सागरले उसलाई आफ्नो फेसबुक आइडीसमेत दिएको हुन्छ ताकि विश्वास अझै बढोस् भनेर।
मान्छेको मन न हो परिवर्तन हुन के बेर लाग्छ र सागरमात्र हो काजलको मायामा पागल हुने काजलको भने उता सागरबाहेक अर्को केटा पनि रहेछ।
यो कुरा सागरले काजललाई लिएर घुम्न जादा थाहा पाउँछ किनकि त्यो दिन काजललाई बारम्बार फोन आइरहेको थियो ऊ फोन उठाउन डराउँथी।
एकपटक फोन उठाउछे अनि रिसाएझैं गरी बहाना बनाउँछे, 'कति फोन गर्या हो म साथीहरूसँग छु भनेसी बुझ्न पर्छ नि' यति शब्द उनले भन्नासाथ सागर झसंग भयो। सागरलाई शंका लाग्छ ऊ मबाट टाढिनुको कारण यो यही त होइन?
त्यसपछि काजलले सागरसँग अब नबोल्ने सम्बन्धमा नबस्ने जस्ता कुराहरू गरेको काजलकी साथी सीमा (काजललाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने बेला एक म्युचुअल फ्रेन्ड, जुन सीमा नै थिइन्, सागरले सीमालाई पहिलेदेखि नै राम्रोसँग चिन्थ्यो, काजल र सागरका कति कुरा सीमाबाट नै आदानप्रदान हुन्थे) ले बताउँछे, 'दाइ छोड्दिनु त्यसलाई त्यो तपाईंसँग बस्न चाहन्नँ उसको अरू नै छ।'
सीमाले सागरलाई सबै कुरा भनी तर पनि सागरले सीमाको कुरा विश्वास गर्न सकेन।
पैसाकै लालचमा ऊ सागरको पछि दौडिएकी रैछे। घर पुगेपछि काजलले भन्छे, 'त्यो फोन गर्ने मेरो भूतपूर्व प्रेमी हो।'
सागरलाई के थाहा काजल अब त्यही भूतपूर्व प्रेमीसँग पुनः सम्बन्धमा जोडिदै छ भन्ने कुरा।
सागरसँग ऊ बोल्न खोज्दिन उसको मेसेजको रिप्लाई आउँदैन, फोन उठ्दैन।
अब चाहिँ उसलाई पक्का हुन्छ कि काजल भूतपूर्व प्रेमीसँग पुनः प्रेममा जोडिन मलाई धोका दिएकी हो।
जिन्दगीमा प्रेम गर्नु गलत हैन प्रेमलाई आफ्नो औजार बनाएर धोका दिनु गलत हो।
सागरको मन के मान्थ्यो काजल उसकी पहिलो माया हो ऊ बोल्न खोज्थ्यो काजल मतलब गर्दिनथी।
उसले अब काजललाई भेट्न धेरै रिक्वेस्ट गरेपछि कागजले हुन्छ लास्ट एक पटक भेट हुन्छु भनेपछि भेट हुन्छ उनीहरूको।
सागर सोध्छ, 'किन मबाट टाढा हुँदैछौ ?' उसको जवाफ सजिलै आउँछ, 'सागर म केबल तिमीलाई साथीमात्र सोच्थे प्रेम सम्बन्धबारे कहिल्यै सोचिनँ र मनमा आएन पनि। म त तिम्रो असल साथी हो।'
उसको यो जवाफले सागरलाई सिंगै आकाश खसेझैं, सिंगै पृथ्वी भाँसिए झैं लाग्यो, उसले दिउँसै अँध्यारो देख्यो।
सागरले निन्याउरो हुँदै भन्छ, 'यत्रो समय यो नाटकीय प्रेम, अनि सँगै घुम्न गएका दिन, गिफ्ट आदानप्रदान, तिम्रा ती झूटा कसम, झूटो माया आखिर केका लागि ? अनि कोठामा सँगै बिताएकी ती दुई चार रात कस्तो सम्बन्ध हो तिम्रो ? ऊ जवाफविहीन भई।
'यस्तो सम्बन्ध एउटा साथीमा हुँदैन जो तिमीले मसँग गरेऊ।'
ऊ टाउको निहुराएर चुप लागी। बिदा पनि नभई उनीहरू आ-आफ्नो बाटो लाग्छन्।
ऊ केबल सागरसँग रमाइलो चाहन्थी माया हैन, अब उसले त्यही भेटपछि सामाजिक सञ्जाल, फोन कल सबैमा ब्लक गर्छे। अब त बोल्ने बाटो नै हरायो। केही समय उसको कारण सागर निकै तड्पिन्छ।
उसका यादहरूले उसलाई हरपल सताउँथ्यो, सम्झना ताजै थिए।
उसले दिएका केही गिफ्टहरू पनि थिए। ती देख्दा उसको मन झन् बिग्रिन्थ्यो। त्यसमध्येमा पनि उसलाई विशेष लाग्ने जन्मदिनमा काजलले दिएको दुई जनाको फोटो प्रेम, यो फोटो छातीमा टाँसी ऊ धेरै पटक रोएको थियो।
त्यसैले उसले दिएका सबै गिफ्ट कुनै दिन भेटेर फिर्ता दिने सोचले एउटा पालिथिनमा प्याक गरेर राख्छ।
केही समयपश्चात् उसको जन्मदिन आउँछ। त्यही जन्मदिनमा उसका गिफ्ट उसैलाई फिर्ता गर्न सागर सीमा बहिनीको मद्दतले जान्छ। सागरलाई देख्दा काजल मुसुक्क हाँस्छे तर केही बोल्ने हिम्मत हुँदैन काजलमा। सागरले मुस्कुराउँदै भन्छ, 'जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना काजल, तिमीलाई मेरो सानो उपहार स्वीकार है।' यति भन्दै सागर त्यहाँबाट निस्किन्छ।
जिन्दगी सार्थक र सहज बनाउन एउटा असल जीवन साथीको जरूरत पर्दोरहेछ त्यस्तो साथी भाग्यमानीले मात्र पाउँछ, सागर यही सोच्छ। प्रेम गरिसकेपछि उसैलाई गर्नुस् जसले तपाईंको सारा सुखदुःखका कुरा बुझोस्। पैसाको लालचमा कसैलाई प्रेम नगर्नू त्यो झन् खतरनाक हुन सक्छ उस्तै परे एउटाको ज्यान जान पनि सक्छ।
आत्महत्या गर्नेसम्म सोचेको सागर उसका केही प्रिय साथीहरूको सम्झाइबुझाइले गर्दा अहिले काजललाई बिर्सिएको छ।
ऊ अहिले खुसी छ। प्रेम उसैलाई गर्नुस् जसले तपाईंलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छ, सुख होइन खुसी खोज्छ। यहाँ पैसा हुँदा अपरिचित व्यक्ति पनि आफ्नो भैदिन्छ, भने खाली खल्ती हुँदा आफ्नै मान्छे पनि टाढिन्छन्। असल बनेर सफल बन्नुहोस् तपाईंको जिन्दगी पक्कै फलदायी हुनेछ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८, ०१:४२:००